The World Nepal News | आफ्नो पक्षमा प्रमाण केही नभएको भारत यसपटक नेपालसँग झुक्नैपर्छ ।
आफ्नो पक्षमा प्रमाण केही नभएको भारत यसपटक नेपालसँग झुक्नैपर्छ ।
संवाददाता | २०७७ जेष्ठ २१, बुधबार
सीमा–विवादको मुद्दा फेरि अर्को पुस्ताको एजेन्डा नबन्ने गरी टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ
नेपालले भारतसित तल परेर सम्झौता गर्ने होइन, सबै सीमा–विवाद समाधान गर्ने बाटो समात्नुपर्छ,लामो समयदेखि भारतीय शासकवर्गको विस्तारवादी सोच र हेपाहा प्रवृत्तिको जालमा हाम्रो कमजोर राजनीतिक नेतृत्व पर्दै आएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । इतिहासमा कुनै वेला हाम्रा शासकले कुर्सी जोगाउन भारतसँग गरेको अनौपचारिक सौदाबाजीका कारण भारी तथ्य र प्रमाणका बाबजुद पनि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादित भूमिजस्तो बनाएर राखिएको पनि प्रस्टै छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर महाकाली नदीपूर्वको जमिन नेपालको हो भनेर हामीले दाबी गरेको त पक्कै हो । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेको वेला सबैतिरको भूमिमा आफ्नो प्रभाव फिर्ता गरेको सन्दर्भसित जोडेर हेर्ने हो भने सधैँ जित्ने इतिहास भएको गोर्खाली सेनाले त्यतिवेला आर्जेको पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको काँगडासम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’को विषय त छँदै छ ।
सरकारको साहसिक कदम : हालै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाल सरकारले पहिलोपटक हमेसा आफूलाई ‘बडेभैया’ ठान्ने भारतीय शासक वर्गको दादागिरीलाई सानदार ‘काउन्टर’ दिएको छ । खुला सीमा छ भन्दैमा, भूगोलको हिसाबले देश सानो छ भन्दैमा, बाटो र व्यापारको बाध्यताको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेर सीमाका पिलर उखेल्ने, सीमाक्षेत्रलाई गोलमटोल बनाउने, नेपालको राजनीति अस्थिर र कमजोर बनाइराख्न हरहमेसा प्रयत्नरत रहने र त्यही कमजोर भएको मौका छोपेर सीमा अतिक्रमण गरिरहने भारतीय सत्ताको मनोविज्ञानलाई जानेर, बुझेर र हरेक परिणामका लागि तयार भएरै ओली सरकारले जवाफी फायर खोलेको हो ।
यो ऐतिहासिक कदममा सरकार मात्रै हैन, सिंगो देश र जनताको अभिमत साथमा छ । यसकारण कि यो कुनै राजनीतिक मञ्चमा राखिएको धारणा या प्रस्ताव होइन । आफ्नो पार्टीको प्रतिवेदनमा राखिएको दृष्टिकोण जस्तो पनि होइन । यो कुनै मिडियालाई दिएको जवाफ पनि होइन । यो त दुवै सार्वभौम सदनको संयुक्त बैठकमा सिंगो सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा कार्यकारी प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीको आसनबाट गरेको घोषणा हो, जसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । त्यसैले यो अर्थपूर्ण, साहसिक र ऐतिहासिक छ । विश्वभरका राष्ट्रवादी नेपालीको भावनाको सम्मान छ यसमा । विगतका सबै जनआन्दोलन र क्रान्तिको सम्मान मात्रै हैन, पुष्पलाल र मदन भण्डारी, बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहको सम्मान पनि जोडिएको छ यस घोषणामा ।
‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ? भारतलाई म सोध्नेवाला छु…’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो सम्बोधनले भारतीय मिडियादेखि राजनीतिककर्मी र विद्वान्हरूमा समेत खैलाबैला मच्चाइदियो । बोलेको त सत्य र न्यायको कुरा मात्रै हो तर असत्य, झुट र दमनका नंग्रा फैलाउन खोज्नेलाई सत्य र साहसले जवाफ दिन सक्छ भन्ने मान्यता एकपटक पुनः प्रमाणित भएको छ । यो सम्बोधन र साहसिक कदमले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको ‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने’ उद्घोषले सार्थकता पाएको देखिन्छ ।
उमंगित जनता : नयाँ नक्सा जारीपछि ‘सरकारप्रति सलाम, निर्णयप्रति उच्च सम्मान’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल एकाएक सकारात्मक बन्यो । नियत नबोकेका आलोचक प्रशंसा गर्न थाले । अलिअलि नियत बोकेकाहरू ‘नक्सा जारी गरेर मात्रै हुन्छ ? भूमि नै ल्याउनुपर्‍यो नि !’ भन्दै मिश्रित विचार राख्न थाले भने कोहीचाहिँ ‘कहिलेसम्म टिक्छ हेरौँला’ भन्न थाले । यो निर्णयको क्रेडिट लिन ठूलै प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि देखियो । आमजनताले त खुलेर प्रशंसा गर्ने नै भए ।
नयाँ नक्साले संसारभर रहेका नेपाली समुदायभित्र मात्रै हैन, विश्वबजारमै पनि बहस तातियो । पक्षमा ठूलो स्वर र विपक्षमा भारतीय सानो स्वर प्रकट भयो । यो घटनाले नेपाललाई हेर्ने विश्व जगत्को धारणामा पनि ठूलो बद्लाव त आयो नै, सँगसँगै भारतीय शासक वर्गको विस्तारवादी ‘बडेभैया प्रवृत्ति’को पनि राम्रै विज्ञापन भयो । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रियताको मुद्दामा सिंगो संसद् र सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिए । सरकार प्रमुखको हिसाबले सबै पार्टी, संसद् र आफ्नो माटोलाई माया गर्ने आमजनताको भावनाको साहसिक र एकमुस्ट नेतृत्व गर्नुभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको ओझ झनै ओजिलो बन्यो ।
भारतीय बहसको सार : नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको घोषणा गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेसँगै (मूलतः संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि) भारतीय मिडिया नेपालप्रति एकाएक आक्रमक बन्य‍ो । भारत सरकारका उच्च अधिकारी, नेपालका जानकार प्राध्यापक र बुद्धिजीविको मिश्रित विचार बजारमा आएका छन् । भारतीय बजारमा छरपस्ट भएका विचारलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
१. भारत सरकार भन्छ– नेपालको एकपक्षीय नक्सा भारतलाई स्वीकार्य छैन । उसको यो औपचारिक भनाइ भारतीय शासक वर्गको ‘बडेभैया प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति हो । यसले भारत सजिलैसित समस्याको समाधानका लागि तयार छैन भने सन्देश दिन्छ ।
२. भारतीय सेना प्रमुखले त सिधै भने, ‘अरू कसैको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।’ चिनतिर लक्षित उनको यो भनाइले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई तोडमरोड गरेर चिनियाँ ध्रुवतिर राजनीतिलाई जोड्न अभिप्रेरित गर्छ । नेपाल चिनको संरक्षणमा छ र उसले चिनकै इसारामा यो सबै गरिरहेको छ भन्ने अफवाह फैलाएर सीमामुद्दा धिमा पार्ने उसको अभिप्रायः देखिन्छ ।
द्विपक्षीय सीमा–विवादमा आफ्नो पक्षमा बलियो प्रमाण केही नभएको भारत यसपटक नेपालसँग झुक्नैपर्छ । ‘सिंहमेव जयते हैन, सत्यमेव जयते’ नै हुनुपर्छ ।
३. भारतीय मिडियाको आक्रामक प्रहार र प्रमाणविनाको एकोहोरो अफवाहभित्र ठूलो मिडिया राजनीति लुकेको देखिन्छ । प्रमाण आफ्नो पक्षमा नभएपछि मिडियाको ढाड चढेर सिंगो भारतीय जनतामा नेपालविरोधी न्यारेटिभ निर्माण गर्न चाहन्छ, भारतीय संस्थापन । चोरले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न ठूलो स्वर बोलेजस्तै हो यो ।
४. भारतीय राजनीतिक र बौद्धिक जगत्मा अर्को बहस पनि जमेरै भएको देखिन्छ, जुन उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिको विषय पनि हो । भारतमा रहेका नेपाली मूलका मतदाता फकाउने मनसायले होस् या नेपालप्रति सदासयता राखेर, उनीहरूले भारतीय शासकले नेपाललाई गरेको नाकाबन्दी र पछिल्लो व्यवहारको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल मामिलाका जानकार मानिने भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनीले त नेपालको मामिलामा मात्र होइन, सारा छिमेकमा भारत फेल भइरहेको स्विकारेका छन् । त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि नेपालबाट नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतका लागि चुनौती सिर्जना भएको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउन नहुने बताएका छन् । नेपालको मामिलामा नरम रूपमा प्रस्तुत भए पनि दुवैले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको एकैस्वरमा आरोप लगाएका छन् ।
अब के हुन सक्छ ? : स्वाभाविक छ, नयाँ नक्सा जारीपछिका दिनमा नेपालभित्र भारतपरस्त शक्ति कमजोर हुनेछन् । उनीहरूको स्वर मलिन हुनेछ । सिंगो नेपाल सीमाको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनेछ । प्रधानमन्त्रीले बलियोसँग बहसको प्रारम्भ गर्नुहुनेछ । नेपालले आफ्नो पक्षमा रहेका भारी प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । भारतीय पक्षसँग बलियो प्रमाण छैन । तैपनि, मरिसकेका राजा महेन्द्र र चन्द्रशमशेरसँग भएको अनौपचारिक सहमतिका कुरा गरेर ‘नेपालले छाडेको भूमि हो’ भन्दै ‘यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो’ भनेर फेरि आलटाल गर्न खोज्नेछन् । सँगसँगै उनीहरूले ओली सरकार ढाल्न, पार्टी फुटाउन राम्रै प्रयास गर्नेछन् । एकजना भारतीय पूर्वविदेश सचिवले त ‘ओली सरकारबाट काम नहुने र नेपालमा नयाँ सरकार बनाउन भारतले भूमिका खेल्नुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक मत दिई नै सके । नेपालको राजनीति कमजोर बनाउन पाए फेरि कठपुतली बनाउन सकिन्थ्यो भनेर भारतले सकभर सीमा–विवाद अहिले नटुंग्याई पर सार्न खोज्नेछ ।
यद्यपि, भारतीय पक्ष जति कडा हुन चाहे पनि उसका लागि नेपालसँग लड्ने अनुकूलता छैन । नेपालमाथि निर्दयी हुँदा भारतमा रहेका नेपाली मूलका मतदाताबाट विश्वास गुमाउनुपर्नेछ । हिन्दू आस्था बोकेको नेपाल र पशुपतिनाथको देश भएका कारण पनि आमहिन्दू मत नेपालीमाथि निर्दयी बनेको रुचाउनेछैन । भारतलाई युद्ध गर्ने मूर्खतापूर्ण इच्छा जागेछ भने पनि चिन नेपालसँगै छ भन्ने भ्रम होस् या सत्यता, जसका कारण आक्रमण गर्ने साहस भारतले गर्नै सक्दैन ।
नाकाबन्दीको हतियार पनि पटक–पटक प्रयोग गरेर भारतीय पक्ष रक्षात्मक बनेको निकट इतिहास साक्षी नै छ । फेरि चिनसँग नेपालले गरेको पारवहन सन्धिले नेपालले आफ्नो विकल्प खोजिरहेको भारतले राम्रोसँग बुझेकै हुनुपर्छ । अब नाकाबन्दी भएछ भने पनि नेपाली जनताले आफूलाई तयार बनाउन सक्नेछन् र केही समय कष्टकर भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो नेपालका लागि फलदायी पनि हुन सक्छ । यसको अर्थ हो, यतिवेला भारतसँग पनि वार्ताको विकल्प छैन । नेपाललाई गलाउने सम्भावना पनि छैन । बरु चिनको उपस्थितिविना मिलाउन पाए खुसी हुन्छ र सफलता ठान्न सक्छ ।
समाधान के त ? : सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वसहितको उच्चस्तरीय वार्ता समिति बन्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट २३ जिल्लाका ७१ स्थानकै विवादको विषय उठान गर्नुपर्छ। आफ्ना सबै सबुत प्रमाणसाथ दाबी गर्नुपर्छ ।
मध्यस्थकर्तासमेत राखेर वार्ता गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धिका बखत इस्ट इन्डिया कम्पनी जोडिएको हुनाले बेलायत सरकार र कैयन् सिमानाको साझेदारीसमेत भएकाले चिनियाँ प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिको विषयमा जोड गर्नुपर्छ । भारत वार्तामा आउनै नचाहेको खण्डमा प्रमाणका आधारमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थताको अन्तिम विकल्प त छँदै छ । अब सीमा–विवाद सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल भारतको स्थायी सीमा निर्धारण गरी काँडेतार लाउने र सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिनुपर्छ ।
यदि कैलाश मानसरोवर जान नेपालको भूमिको बाटो भारतलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसको साटो नेपाललाई बंगलादेश र समुद्री सतहसम्मको आठ लेनको बाटो नेपालका लागि प्रदान गरिनुपर्छ । या सोहीबराबरको पूर्वको भूमि नेपाललाई प्रदान गरिनुपर्छ । चिकेन नेकको भूमि यसका लागि सही हुन सक्छ, ताकि बंगलादेशसँग प्रत्यक्ष पारवहनका लागि सजिलो होस् । यसपटक नेपालले तल परेर सम्झौता गर्नु हुँदैन । सबै विवादको समाधान गरेरै छाड्नुपर्छ । केपी ओलीको जिउँदो र साहसी नेतृत्वमा नेपालले सीमा–विवादको मुद्दा फेरि अर्को पुस्ताको एजेन्डा नबन्ने गरी टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । आफ्नो पक्षमा प्रमाण केही नभएको भारत यसपटक नेपालसँग झुक्नैपर्छ । ‘सिंहमेव जयते हैन, सत्यमेव जयते’ नै हुनुपर्छ ।
२०७७ जेष्ठ २१, बुधबार प्रकाशित